Puntland oo looga dabaaldegay sanadguuradeedii 11-aad ee dhismaha Puntland. [Akhris …] – Radio Daljir
Garowe, Aug, 01 – Dawladda Puntland ayaa dabaaldeg ballaaran u samaysay sanadguuradeedii 11-aad ee ka soo wareegtay xilligii dhidibadda loo taagay ee sanaddii 1998, taasi oo ku beegan maanta oo ay taariikhdu tahay 1-da bisha Agoosto.
Boqolaal kun oo qof ayaa ka soo qeybgalay xafladda xuska 1-da Agoosto oo lagu qabtay barxadda weyn ee bartamaha magaalada Garowe ee xarunta dawladda Puntland, kuwaasi oo iskugu jiray qeybaha kala duwan ee bulashada ku dhaqan dhammaan gobollada kala duwan ee dawladda Puntland kuwaasi oo safar uga yimid meelo kala gadisan si ay uga qeyb galaan munaasabadda xuska 1 Agoosto.
Munaasabaddaan oo ahayd middii ugu ballaarnayd ee abid loo sameeyo 1 Agoosto oo ah asaaskii dawladda Puntland ayaa loo diyaarshay si cajab badan ku dhalisay dhammaanba bulshadii ka soo qeyb gashay xafladdaasi, waxaana goob joog ka ahaa madaxweynaha PL C,raxmaan Maxmuud Faroole, ku xigeenkiisa Gen, C/samed Cali Shire, inta badan xubnaha golaha wasiirada ee PL, gudoomiyaha Barlamaanka iyo marti sharaf kale.
Jawiga ayaa ahaa mid huwan farxad iyo dareen qiiro xambaarsan oo dadku ay aad ula dhacsanaayeen, waxaana goobta koox koox u marayey qeybihii kale duwanaa ee loogu talagay inay ka qeybgalaan sida fardo lagu shixnay calanka Somaliya ayna saaran yihiin dhallinyaro dhar cad ku labisan. gabdhao xiran calanka Somaliya, ardayda iskuulada iyo jaamacdaha, uruda haweenka, shaqaalaha wasaaradaha, dadka soo barakacay, kooxaha ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka, kooxaha ciyaaraha oo mid kasta wato calaamado u gaara ayaa soo maray.
Ciidamada Booliiska, Daraawiishta iyo asluubta ayaa halkaasi ku soo bandhigay gaadda ka cayaar dadka ku reebay xusuus la mid ah tii dawladdii dhexe ee Soomaaliya iyadoo dhammaan kooxuhuna ay salaamayeen madaxda dawladda iyo dadweynaha.
Ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana dhammaan waddooyinka magaalada Garoowe dhaxdeeda ah la dhigay ciidanka booliska dawladda Puntland oo baaritaan dheeraad ah ku samaynayey dadweynaha waxaana la joojiyey dhammaan gadiidkii dhaxmari jiray magaalada maraka laga reebo kan ciidanku ay wadtaan.
Baraha koontarool ee magaalada laga soo galay ayaa la xiray mana jirin maanta wax gaadiid ah oo magaalada ka baxay ama soo galay, sidoo kana waxaa hawada muddo saacado ah laga saaray isgaarsiinta magaalada Garoowe, taasi loo aanaynayey arrimo la xiriira xagga ammaan, dadweynaha ayaa si aad u buux-dhaafshay waddooyinka waa-weyn ee magaalada Garoowe kuwaasi oo boolisku ay hortaagnaayeen si aysan u soo gaarin meesha ciidanku ay lugta ku marayeen.
Ma jirto cid wax ku noqotay ama ay wax soo gaareen intii ay xafladdu socotay illaa maanta, mana jirin wax sharqan xabadeed ah ciidanku marna adeegsadeen intii ay ku howlanaayeen sugidda ammaanka iyo illaalinta kala danbaynta.
Madaxweynaha Puntland oo shalay ku soo laabtay Garoowe ayaa gacanta u haadinayey dadka isagoo dhoola cadeynaya, waxaana uu markii dambe jeediyey hadal kooban oo mahad celin ah, laakiin xaflad ballaaran oo iminka ka socota xarunta PDRC ee magaalada Garoowe ayaa la filayaa inuu madaxweynuhu ka jeediyo khub ku aadan sanadguurada iyo safarkiisii.
Xafladda ka socota xarunta PDRC ee magaalda Garoowe ayaa loo qorsheeyey dhammaan mas’uuliyiinta dawladdu in ay ka hadlaan kuna soo bandhigaan Puntland iyo wixii u soorto galay tan iyo markii la unkay, waxaana hal ku dhigga sanadku uu ahaa Sixidda maamulka iyo sugidda ammaanka.
C/fitaax Cumar Geeddi iyo Tallman.